Izigaba ze-hypertension ye-arterial kanye nokuhlukaniswa kwe-hypertension > Isifo sikashukela
Ukuhlukaniswa kwezigaba ze-hypertension
Ngaphansi kwegama elithi "umfutho wegazi ophakeme", "umfutho wegazi ophakeme"ibhekise kwi-high blood pressure (BP) syndrome kumfutho wegazi ophakeme kanye ne-hypertension ye-arterial hyp izimpawu.
Kufanele kugcizelelwe ukuthi umehluko we-semantic ngokuyaumfutho wegazi ophakeme"nokuthi"umfutho wegazi ophakeme"cishe hhayi. Ngokulandelayo kusuka ku-etymology, hyper - kusuka esiGrekini., ngaphezulu - isiqalo esibonisa okweqile kokujwayelekile, i-tensio - kusuka kuLat. - ukungezwani, amathoni - avela esiGrekini. - ukungezwani. Ngakho-ke, amagama athi" umfutho wegazi ophakeme "no" umfutho wegazi ophakeme "empeleni kusho into efanayo -" ukweqisa ".
Ngokomlando (kusukela ngesikhathi sikaG.F. Lang) kuthuthukiswe ukuthi igama elithi "umfutho wegazi ophakeme" futhi, ngokufanelekile, "umfutho wegazi ophakeme" usetshenziswa eRussia, igama elithi "umfutho wegazi ophakeme".
I-Hypertension (GB) iqondakala isho isifo esenzeka njalo, ukubonakaliswa okuyinhloko okuyi-arterial hypertension syndrome, okungahambisani nokuba khona kwezinqubo ze-pathological lapho ukukhuphuka komfutho wegazi (BP) kubangelwa ukuthi kuyaziwa, ezimweni eziningi kuqedwe, izimbangela ("izimpawu eziphambana nomfutho wegazi") (Izincomo ze-GFCF, 2004).
I. Izigaba zehypertension:
Isigaba se-Hypertension (GB) I kuphakamisa ukungabikho koshintsho "kwizitho ezihlosiwe."
Isigaba II se-Hypertension (GB) kusungulwe kukhona izinguquko ezivela kwelilodwa noma ngaphezulu "izitho ezihlosiwe".
Isigaba se-Hypertension (GB) esungulwe phambi kwezimo zomtholampilo ezihambisanayo.
II. Izinga le-hypertension ye-arterial:
Amazinga we-arterial hypertension (blood pressure (BP) level) abekwa etafuleni No. 1. Uma amanani we-systolic blood pressure (BP) ne-diastolic blood pressure (BP) ewela ezigabeni ezahlukahlukene, khona-ke kusungulwa amazinga aphezulu e-hypertension (AH). Ngokunembile, izinga le-Arterial Hypertension (AH) lingasungulwa esimweni sokuqala kokutholwa kwe-Arterial Hypertension (AH) nasezigulini ezingathathi izidakamizwa ze-antihypertensive.
Inombolo yetafula 1. Incazelo nokuhlukaniswa kwamazinga wegazi (BP) (mmHg)
Ukuhlukaniswa kwethulwa ngaphambi kuka-2017 nangemva kuka-2017 (kubakaki)
Izigaba Zengcindezi Yegazi (BP) ISystolic Blood Pressure (BP) Umfutho wegazi we-Diastolic (BP)
Umfutho wegazi ofanele = 180 (>= 160*) >= 110 (>= 100*)
I-Isstated hypstension hypertension >= 140 * - Ukuhlukaniswa okusha kwezinga le-hypertension kusuka ngo-2017 (ACC / AHA Hypertension imihlahlandlela).
I. Izici zobungozi:
- amadoda> iminyaka engama-55 ubudala
I-OXS> 6.5 mmol / L (250 mg / dl)
I-HPSLP> 4.0 mmol / L (> 155 mg / dL)
I-HSLVP 102 cm yabesilisa noma> 88 cm yabesifazane
e) Amaprotheni asebenzayo:
e) Izici ezingeziwe zobungozi ezithinta kabi ukuqashelwa kwesiguli nge-hypertension ye-arterial hypertension (AH):
- Ukubekezelela ushukela okhubazekile
- Sedentary yokuphila
- Ukwanda kwe-fibrinogen
g) Isifo sikashukela mellitus:
- Ijubane le-glucose yegazi> 7 mmol / L (126 mg / dL)
- Ushukela wegazi ngemuva kokudla noma amahora amabili ngemuva kokuthatha u-75 g we-glucose> 11 mmol / l (198 mg / dl)
II. Ukunqotshwa kwezitho okugxilwe kuzo (isigaba sesifo segazi 2):
a) Ihypertular hypertrophy engakwesokunxele:
ECG: Isibonakaliso se-Sokolov-Lyon> 38 mm,
Umkhiqizo weCornell> 2440 mm x ms,
I-Echocardiography: I-LVMI> I-125 g / m2 yabesilisa kanye> ne-110 g / m2 yabesifazane
I-Chest Rg - i-Cardio-Thoracic Index> 50%
b) Izimpawu ze-Ultrasound zokuqina kwe-artery wall (ubukhulu be-carotid intima-media ungqimba> 0.9 mm) noma ama-atherosmarkotic plaque
c) Ukwanda okuncane kwe-serum creatinine I-115-133 μmol / L (1.3-1.5 mg / dl) yamadoda noma i-107-124 μmol / L (1,2-1.4 mg / dl) yabesifazane
d) I-Microalbuminuria: I-30-300 mg / ngosuku, i-urin albumin / ratiinine ratio> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) yabesilisa kanye> 31 mg / g (3.5 mg / mmol) yabesifazane
I-III. Izimo zemitholampilo ezihlangene (ezihambisanayo) (isigaba 3 somfutho wegazi ophezulu)
I-OXS> 6.5 mmol / L (> 250 mg / dL)
noma i-HLDPL> 4.0 mmol / L (> 155 mg / dL)
noma i-HPSLP i-102 cm yabesilisa noma> 88 cm yabesifazane
g) I-hypertrophy yangakwesobunxele
h) Izimpawu ze-Ultrasound zokuqina kwe-artery wall (ubukhulu be-carotid intima-media ungqimba> 0.9 mm) noma ama-atherosmarkotic plaque
futhi) Ukwanda okuncane kwe-serum creatinine I-115-133 μmol / L (1.3-1.5 mg / dl) yamadoda noma i-107-124 μmol / L (1,2-1.4 mg / dl) yabesifazane
k) I-Microalbuminuria: I-30-300 mg / ngosuku, i-urin albumin / ratiinine ratio> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) yabesilisa kanye> 31 mg / g (3.5 mg / mmol) yabesifazane
l) Isifo se-Cerebrovascular:
Isifo sohlangothi lwe-hemorrhagic
Ingozi yesikhashana yokungasebenzi komzimba emzimbeni
m) Isifo senhliziyo:
Ukuvuselelwa kabusha kweCoronary
Ukwehluleka Kwezinhliziyo Okudala
m) Isifo sezinso:
Ukwehluleka kwe-Renal (i-serum creatinine> 133 μmol / L (> 5 mg / dl) kwabesilisa noma> 124 μmol / L (> 1.4 mg / dl) kwabesifazane
I-Proteinuria (> 300 mg / ngosuku)
o) Isifo Sokuwohloka Kwamathambo:
Ukukhipha i-Aortic Aneurysm
Ukulimala kwezimpawu emithanjeni yethambo
n) I-Hypingency retinopathy:
Izinhlungu zokuphefumula noma zokuphuma emzimbeni
I-Optic nerve edema
Inombolo yetafula 3. Ukushintshwa kwengozi kweziguli nge-arterial hypertension (AH)
Izifinyezo etafuleni elingezansi:
I-HP - ingozi ephansi,
SD - ubungozi obulinganiselwe,
ILanga - ingozi ephezulu.
Ezinye izinto zobungozi (RF) Izinga eliphakeme
130-139 / 85 - 89 I-1st degree hypertension
140-159 / 90 - 99 Umfutho we-Hypertension 2 degrees
160-179 / 100-109 Ama-degree angu-3
I-HP I-Uri BP
1-2 FR I-HP I-Uri I-Uri I-BP kakhulu
> I-3 RF noma ukulimala kwesitho noma isifo sikashukela BP BP BP I-BP kakhulu
izimo zomtholampilo I-BP kakhulu I-BP kakhulu I-BP kakhulu I-BP kakhulu
Izifinyezo kuthebula elingenhla:
I-HP - ingozi ephansi ye-hypertension,
I-UR - ubungozi obulinganisele be-hypertension,
ILanga - ingozi enkulu ye-hypertension.
Ukuhlukaniswa kwe-Arterial Hypertension
Ngomfutho wegazi ophakeme, isiguli ngokwengqondo sandisa ingcindezi ebangeni lisuka ku-140/90 mm Hg. kufika ku-220/10. Lesi sifo sihambisana nezinkinga ezithi kube nomfutho wegazi, ubungozi bokuqunjelwa yi-myocardial infarction kanye nesifo sohlangothi. Ukuhlukaniswa okuvamile kwe-hypertension ye-arterial kungenxa yokwenzeka. Ngokuya ngokwalokho okwaba umfutho kanye nembangela yokwanda kwengcindezi yegazi (BP), kukhona:
Umfutho wegazi ophambili uyisifo imbangela yaso engeke yaziwa ngenxa yezifundo ezinamandla (ze-ultrasound zenhliziyo, zenhliziyo) nelebhu (ukuhlaziya kwegazi, umchamo, iplasma). Umlando we-hypertension onembangela engachaziwe uchazwa njenge-idiopathic, ebalulekile.
I-Hypertension ene-hypertension eyinhloko kuzodingeka ukuthi ilondoloze umfutho wegazi ojwayelekile (120/80) kuyo yonke impilo. Ngoba kuhlale kunobungozi bokuthi lesi sifo sizoqala kabusha. Ngakho-ke, i-idiopathic arterial hypertension ichazwa njengezinhlobo ezingamahlalakhona. Umfutho wegazi ophakeme, naye uhlukaniswe yingozi yezempilo, amabanga, nezigaba.
I-Hypertension yesibili yisifo esingaqunywa yimbangela yakho ngenkathi kuqhubeka ucwaningo lwezokwelapha. Ukuhlukaniswa kwalesi sifo kuvela kwisifo noma i-factor eyabangela inqubo yokwanda komfutho wegazi.
I-hypertension ye-arterial eyinhloko neyesibili ihlukaniswa ngokuya ngokwanda kwengcindezi yegazi:
I-Systolic, lapho kuphakama khona kuphela umfutho wegazi ophakeme. Okusho ukuthi, inkomba ephezulu ingaphezulu kwe-140 mm Hg, ephansi - imvamisa i-90 mm Hg. Esikhathini esiningi, imbangela yalesi simo ukwephulwa kwendlala yegilo, ukwehluleka kwe-hormonal.
I-Diastolic - ikhuphule kuphela umfutho wegazi ophansi (ukusuka ku-90 mm Hg nangaphezulu), ngenkathi ephezulu ingeqi kumamilimitha ayi-130.
I-Systolic-diastolic - izinkomba ezi-2 zokukhonjwa zidluliswa ngokwengqondo.
Ukuhlukaniswa ngesimo senkambo yesifo
I-hypertension ye-arterial yenzeka emzimbeni ngamafomu amabili - i-benign, malignant. Imvamisa, ifomu elilinganisayo uma kungekho ukwelashwa okwanele okufika ngesikhathi iba yindlela yokulimaza emzimbeni.
Nge-hypertension ye-benign kumuntu, umfutho wegazi uqala ukwanda - i-systolic, diastolic. Le nqubo ihamba kancane. Imbangela kumele ifunwe kuma-pathologies omzimba, ngenxa yalokho umsebenzi wenhliziyo uphazamiseka. Ukujikeleza kwegazi lesiguli kungaphazanyiswa, umthamo wegazi elijikeleziwe ligcinwa, kepha ithoni yemithambo, ukuqina kwawo kuncishisiwe. Inqubo ingahlala iminyaka eminingana futhi ihlale impilo yonke.
Uhlobo olubi lwe-hypertension luthuthuka ngokushesha okukhulu. Isibonelo: namuhla isiguli sinengcindezi yegazi engu-150/100 mm Hg, ngemuva kwezinsuku eziyi-7 sezivele zingu-180/20 mm Hg. Okwamanje, umzimba wesiguli uthinteka yi-pathology enobungozi "eyenza" inhliziyo ishaye izikhathi eziyishumi ngokushesha. Izindonga zemikhumbi zigcina ithoni, ukuqina. Kodwa, izicubu ze-myocardial azikwazi ukubhekana nezinga elikhulayo lokujikeleza kwegazi. Isistimu yenhliziyo ayikwazi ukubekezelela, imikhumbi i-spasmodic. Inhlala-kahle yomfutho wegazi ophakeme yanda kakhulu, umfutho wegazi ukhuphuka uye phezulu, ubungozi be-myocardial infarction, i-cerebral stroke, ukukhubazeka komzimba, ukhuphuka komzimba kukhuphuka.
Ngefomu elimaza kakhulu lomfutho wegazi, umfutho wegazi ukhuphuka ufike ku-220/30 mm Hg. Izitho zangaphakathi nezinhlelo ezibalulekile zithola izinguquko ezinkulu: i-fundus igcwele igazi, i-retina iyavuvukala, i-optic nerve iyashiswa, nemikhumbi incishisiwe. Inhliziyo, izinso, nezicubu zobuchopho kufikelwa yi-necrosis. Isiguli sikhononda ngobuhlungu benhliziyo obungabekezeleleki, ikhanda elibi, ukulahleka kombono, isiyezi, ukwehluleka.
I-Hypertension ihlukaniswe izigaba ezihlukile ekucindezelweni kwegazi, izimpawu, ubungozi, ubunzima, ukukhubazeka. Ukuhlukaniswa kwezigaba ze-hypertension kungokulandelayo:
I-Stage 1 hypertension yenzeka ngamanani we-140/90 mm Hg. futhi phezulu. Lawa mavelu angenziwa ngokwejwayelekile ngaphandle kwemithi, ngosizo lokuphumula, ukungabikho kwengcindezelo, ukwesaba, ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba.
Lesi sifo asymptomatic. I-Hypertonic ayiziboni izinguquko empilweni. Izitho eziqondisiwe esigabeni sokuqala sokunyusa umfutho wegazi azihlupheki. Ukuphazamiseka kwempilo ngaphansi kwesifo sokuqwasha, inhliziyo, ikhanda elincane akuqapheleki.
Izinkinga ezinkulu ezinomfutho wegazi ezinamandla zingenzeka ngokumelene nemuva lokushintsha kwesimo sezulu, ngemuva kovalo, ukucindezelwa, ukushaqeka, ukusebenza komzimba. Ukwelashwa kuqukethe ukugcina impilo enempilo, ukwelashwa ngezidakamizwa. I-prognosis yokutakula iyathandeka.
Isiteji 2 se-arterial hypertension sibonisa umfutho wegazi kusuka ku-140-180 / 90-110 mm Hg. Ukuhlelwa ngokweqile kwengcindezi kutholakala kuphela ngemithi. I-Hypertonic ikhononda ngobuhlungu benhliziyo, ukwehluleka ukuphefumula, ukuphazamiseka kokulala, i-angina pectoris, isiyezi. Izitho zangaphakathi ezithintekile: inhliziyo, ubuchopho, izinso. Ikakhulu, ngokwemiphumela yokuhlolwa, isiguli sizoba ne-hypertrophy ye-ventricle yesobunxele ye-myocardium, spasm of the shipping, ngokusho kokuhlaziya - amaprotheni omchamo, okweqile kwenqanaba le-creatinine egazini.
Ubunzima be-hypertensive buholela ekushayweni, ekushayweni yinhliziyo. Isiguli sidinga ukwelashwa njalo. I-Hypertgency ingenza iqembu lokukhubazeka ngenxa yezizathu zezempilo.
Isigaba 3 somfutho wegazi ophezulu unzima, izinkomba zomfutho wegazi wesiguli - 180/110 mm Hg futhi phezulu. Ezigulini ezinomfutho wegazi ophakeme, kutholakala izitho ezihlosiwe: izinso, amehlo, izinhliziyo, imithambo yegazi, ubuchopho, ipheshana lokuphefumula. Izidakamizwa ze-antihypertensive azihlali zehlise umfutho wegazi ophakeme. Umuntu akakwazi ukuzisebenzela ngokuzimela, uba ongasebenzi. Ukwanda kwengcindezi yegazi ukuya ku-230/20 kwandisa ingozi yokufa.
Ukuhlukaniswa kwe-WHO kwe-hypertension (okungenhla) kuyadingeka ekuhlolweni kwesifo esigcwele esigcwele ukuze kukhethwe amaqhinga afanele okwelashwa. Ukwelashwa ngokusetshenziswa kwezidakamizwa okukhethwe kahle kungazinza inhlala-kahle yomfutho wegazi ophakeme, kugwemeke izingqinamba ezinomfutho wegazi, ubungozi be-hypertension, ukufa.
Umfutho wegazi ophezulu wehlukaniswa ngokuya ngokufundwa kwengcindezi yegazi ngamadigri: ukusuka ku-1 kuye ku-3. Ukuthola ukuthambekela kokuqina komfutho wegazi, kubalulekile ukukala umfutho wegazi ezandleni zombili. Umehluko ngu-10-15 mm Hg. phakathi kwezilinganiso, umfutho wegazi ukhombisa isifo se-cerebrovascular.
Udokotela ohlinzayo wamathambo wethule indlela yokuzwakala, ukulinganisa okuhle kwengcindezi yegazi. Ingcindezi efanelekile ibhekwa njenge-120/80 mm Hg, futhi ijwayelekile - 129/89 (isimo se-prehypertension). Kukhona umqondo wokucindezela kwegazi okujwayelekile: 139/8. Ukuhlukaniswa kwe-hypertension ngama-degree (mmHg) kungokulandelayo:
I-1st degree: 140-159 / 85-99,
I-2nd degree: 160-179 / 100-109,
I-3rd degree: ngenhla kwe-180/10.
Ukubona izinga le-hypertension kwenzeka ngokumelene nesizinda sokuntuleka okuphelele kokwelashwa ngezidakamizwa ze-antihypertensive. Uma isiguli siphoqelelwa ukuthi siphuze umuthi ngenxa yezizathu zezempilo, khona-ke isilinganiso senziwa ekuncishisweni okuphezulu komthamo wabo.
Kweminye imithombo yezokwelapha, ukubizwa kungenziwa nge-grade 4 arterial hypertension (i-systolic hypertension eyingqayizivele). Isimo sikhonjiswa ngokwanda kwengcindezi ephezulu ngephansi elijwayelekile - 140/90. Lo mtholampilo utholakala kubantu asebekhulile nasezigulini ezinokuphazamiseka kwe-hormonal (hyperthyroidism).
I-Hypertonic ekuxilongeni kwakhe ibona hhayi lesi sifo kuphela, kodwa futhi nezinga lobungozi. Yini ubungozi be-hypertension? Ngobungozi, kudingeka siqonde iphesenti lethuba lokuthola unhlangothi, ukuhlaselwa yisifo senhliziyo, namanye ama-pathologies aqukethe isizinda se-hypertension. Ukuhlukaniswa kwe-hypertension ngezinga lobungozi:
Ingozi ephansi 1 yi-15% yokuthi eminyakeni eyi-10 ezayo, umfutho wegazi ophakeme uzoba nokuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi
Ubungozi obuphakathi 2 buveza ithuba le-20% lezinkinga,
Ingozi enkulu 3 ngu-30%,
Ubungozi obukhulu kakhulu be-4 bukhulisa amathuba ezinkinga zokuphila kahle ngo-30-40% nangaphezulu.
Kunezindlela ezintathu eziphambili zokuhlukaniswa kwengozi kweziguli ezinomfutho wegazi ophezulu: izici zobungozi, ubungako bokulimala kwezitho eziqondisiwe (kwenzeka nge-hypertension yesigaba 2), izimo ezengeziwe zeklinikhi zekliniki (ezitholakala ezigabeni ezi-3 zesifo).
Cabanga ngemigomo eyinhloko, izici zobungozi:
Okuyisisekelo: kwabesifazane, amadoda angaphezu kuka-55, kubhema,
I-Dyslipidemia: i-cholesterol ephelele kune-250 mgdl, i-low-density lipoprotein cholesterol (HLDPL) ngaphezulu kwe-155 mg / dl, HLDPV (density high) more than 40 mg / dl,
Umlando welifa (umfutho wegazi ophakeme ezihlotsheni eziqondile),
Inkomba yamaprotheni esebenza-ngaphezulu kwe-1 mg / dl,
Ukukhuluphala kwesisu - isimo lapho isilinganiselo sabesifazane besinqe siphezulu kwe-88 cm, amadoda - 102 cm,
Ukubekezelela ushukela okhubazekile,
Ukweqile kwe-febrinogen egazini,
Esigabeni sesibili salesi sifo, kuqala ukulimala ezithweni zangaphakathi (ngaphansi kwethonya lokwanda kwegazi, isikhala semithambo yegazi, umoya-mpilo kanye nokushoda kwezakhi), ukusebenza kwezitho zangaphakathi kuyaphazamiseka. Isithombeni somtholampilo wesigaba 2 somfutho wegazi ophezulu kanje:
Izinguquko ze-trophic ku-ventricle yenhliziyo yesokunxele (isifundo se-ECG),
Ukomisa ungqimba olungaphezulu lomthambo we-carotid,
Ukwakhiwa kwe-Atherossteotic plaque,
Ukwanda kwamazinga we-serum creatinine ngaphezulu kwe-1.5 mg / dl,
Isilinganiso se-albin ne-creatinine emchameni.
Izinkomba ezi-2 zokugcina zikhombisa ukulimala kwezinso.
Ngaphansi kwezimo zemitholampilo ezihlangene (ekunqumeni usongo lwe-hypertension) qonda:
Ukushaywa komoya kumithambo yegazi, imithambo, imikhumbi,
Ukuvuvukala kwe-optic nerve, ukulimala.
Ubungozi 1 busungulwa kwiziguli esezikhulile ezineminyaka engaphezu kuka-55 ubudala ngaphandle kwama-pathologies acasulayo. Ubungozi 2 bunqunywe ekuxilongeni i-hypertension ngokubakhona kwezinto eziningana ezichazwe ngenhla. Ingozi 3 ikhulisa lesi sifo seziguli ezinesifo sikashukela, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, i-hypertrophy yesisu, ukwehluleka kwe-renal kanye nomonakalo ezithweni zombono.
Sengiphetha, sikhumbula ukuthi i-arterial hypertension ithathwa njengesifo esikhohlisayo, esiyingozi ngenxa yokungabikho kwezimpawu zokuqala. Umtholampilo we-pathologies uvame ukungabi namandla. Kepha, lokhu akusho ukuthi lesi sifo ngeke sisuke esigabeni sokuqala (nge-shinikizo legazi le-140/90) liye kwesibili (umfutho wegazi 160/100 nangaphezulu). Uma isigaba sokuqala simiswa yimithi, i-2 iyasondeza isiguli eduze nokukhubazeka, bese i-3 - ikhubazeke impilo yonke. Umfutho wegazi ophezulu lapho ungekho ukwelashwa okwanele okufika ngesikhathi kubangela ukulimala kwezitho ezitholakele, ukufa. Ungabeki impilo yakho engozini, hlala ugcine u-tonometer!
Izici namaqembu anobungozi
* Izici ezingezimbi nezintsha "ezintsha" (azinakwa ekuhlukaniselweni kobungozi).
Izinga lengozi le-hypertension:
Ukuhlukaniswa kwengozi ukuze kuhlolwe i-prognosis yeziguli ezinomfutho wegazi ophakeme
Umfutho wegazi, mmHg
Ingozi ephansi Ingozi ephakathi Ingozi ephezulu
II. Izici zobungozi ze-1-2 Ingozi ephakathi Ingozi ephakathi Ingozi ephezulu Ingozi ephezulu